musha » Blog » 10 Fitness Mazano kune Vatangi
Kurasikirwa Mazano kune Vatangi
Kufunga nezvekutanga tsika yekushanda? Kutanga nguva kuenda kumitambo? Shandisa mazano aya ekufananidzira kweHNUMX yevatangi vekutanga kuti uone kuti unozadzisa zvinangwa zvako.
1. Ita Kuti Basa Rako Rinokosha Kwazvo
Kana iwe uchida kuwana zvakanakisisa kubva muchidzidzo chako chekudzidzisa, unofanirwa kuchengeta mupfungwa kuti kune 80% yemigumisiro yaunowana kubva pakunoshanda kwako zvechokwadi inobva chete 20% yekushanda kwako.
Izvi zvinoreva kuti muchikamu cheawa, maminetsi gumi nemaviri chete ekurovedza muviri anozopa kune yakawanda mhedzisiro yako. Iwe unozofanirwa kuita iyo maminetsi kuverenga chaizvo. Shandisa macompion anoteedzera anoshanda kupfuura kamwe chete tsandanyama boka panguva kuti unyatsotora nguva yako.
2. Nguva dzose Yeuka Kudya Utano
Chero chero chinangwa chekuumba muviri chinogona kuwanikwa chete nekudya chikafu chine hutano. Kana iwe uri kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri kuitira kuti iwe ugone kuenda kumba uye unodya cheeseburger yakapetwa ine munhu-2 anoshandira maFrench mafry, haungaite muviri wako chero hunhu. Paunoenda kunotenga, tenga utano hwakanaka panzvimbo yezvisina kudya zvokudya.
Iwe unofanirwa kuona kune izvo kuti iwe unodya zvine mwero, uye uchifunga mupfungwa dzako kuti kana iwe uri kupisa kubva kumwe macalorie, uchafanirwa kudya zvishoma zvishoma kuti uve nechokwadi chekuti iwe une simba rakaringana kune iro rese zuva. Chengetedza chikafu chako uye dzivirira kudya kwemafuta.
3. Shandura Zvido Zvokudya Zvako
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unodya zvakanaka pamwe nekudya zvine hutano. Kudya zvakanaka kunosanganisira kudya panguva dzakakodzera dzezuva. Kupotsa kudya kwekuseni ipfungwa inotyisa uye haufanire kudya kunonoka pakati pehusiku futi. Kudya husiku pakati pehusiku kana kana iwe uchinetseka zvinongotungamira mukudya zvisina basa macalorie. Taura nemudzidzisi wega nezve izvo zvingakubatsire iwe kuti ugone kuzadzisa zvinangwa zvako.
4. Ronga Muitiro Wako Wokudzidzira Maitiro
Kuti uve nechokwadi chekuti iwe uchinyatso kuziva kana iwe uchizove unodzidziswa uye kana iwe uchigona kutarisira kune imwe nguva yekudzosa, iwe unofanirwa kunyatso gadzira chirongwa. Rangarira kuisa mazuva ekuzorora uye unzwisise nezve yakawanda sei nguva yemahara yaunayo.
Rangarira kugara nehurongwa hwako zvakanyanya sezvinobvira kuti iwe usapinde mutsika yekusvetuka jimu. Kupunzika iko kwekurovedza muviri kazhinji itsika yakaipa. Iwe haugone kuzadzikisa zvinangwa zvako kana iwe ukapinda mutsika yekushayikwa kwako kurovedza muviri.
5. Ita A 100% Kuzvipira kuHutano
Unofanirwa kurangarira kuti shanduko yemuviri wako inoda kuzvipira kuzere kubva kwauri. Iwe haugone kutsika zuva kana maviri pano neapo, nekuti iwe unonzwa sekunge unokodzera zuva rekuzorora. Ronga kuti zuva rako rekuzorora richava riini uye unamatire kune iro. Kunyangwe iwe uine rwendo rwakarongwa, shanyira iyo yemuno gym, uye ita shuwa yekutora awa kubva kune yega zuva rimwe chete kuti ubude. Gara uchienderana nekudya zvine hutano zvakare.
6. Usarega Kufungidzira Kuchikumisa
Kana iwe uri mukadzi ari kuyedza kudzikisa huremu uye nekukura mutete uye mudiki chimiro, zviri nyore kutarisa kune mukadzi anovaka muviri uye nekukurumidza kutya.
Ichokwadi ndechekuti hazvigoneke kuti vakadzi vawande zvakadaro; zvinoda imwe hurongwa uye nesimba. Iwe hauzoendi zvisirizvo kana ukabatirira pachirongwa icho chaunopihwa nemurairidzi wako.
7. Funga kuZvibvumirano
Unofanirwa kuyeuka kuti uri kungotanga nekutakura. Kuti urege kudzikurira uye kuti urege kuzviisa mukuenderera mberi nekurovedza kwako, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti iwe unozviziva iwe nezvidzidzo zvekutanga.
Kutanga nemamwe masekendi akareruka uye wozowedzera chirongwa chako chekurovedza muviri apo paunowedzera kuva nechivimbo uye sezvo makwikwi ehutano hwako anotanga kusimuka.
8. Gadzirira Nzira Yenyu Itsva
Ita shuwa kuti iwe unozviita iwe unowanikwa kune yekurovedza muviri uye uve neyakaomarara chirongwa yekuti iwe waungade yako Workout kuti iende. Unofanirwa kuuya nezvinangwa zvine musoro futi, saka kana uchida kuva nepaketi nhatu dzemimba, tarisa kuzadzikisa tsananguro yemhasuru mukati memwedzi mitanhatu kana kana uchida kurasikirwa nemapaundi makumi maviri, ita shuwa kuti inguva yakatarwa yawakazvimisira zvinogoneka. Hakuna mudzidzisi wega anokwanisa kukubatsira kana iwe usingazive zvinangwa zvako.
9. Yeuka kuita Cardio
Iwe unoda kuve ne6-kurongedza mudumbu, makuru biceps, uye ane simba makumbo? Iwe haugone kuwana izvo zvinhu nekungosimudza masimbi. Iwe unofanirwa kuyeuka kuita cardio futi. Kune michina yakasiyana siyana inowanikwa kumakirabhu ehutano akawanda. Mazhinji magym ane treadmill, ellipticals, maekisesaizi emabhasikoro, uye michina yekukwasva
Iwe unofanirwa kuona kuti unopisa mafuta nekuita kakawanda cardio uye pakupedzisira tsandanyama tsananguro yako ichatanga kuratidza.
10. Usavhundutsirwe paGym
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti munhu wese arikurovedza muviri ari mumamiriro ezvinhu akafanana, uye kwete munhu wese ari 20-year-old bodybuilder. Munhu wese aripo kuti awane imwe mhando yechinangwa uye munhu wose anofanira kutanga pane imwe nzvimbo.
Usatombo kunetseka nezve vamwe vanhu ingo tarisa pane ako zvibodzwa uye ita yako Workout. Kana iwe uchitya kurovedza muviri uri wega, kurovedza muviri neshamwari kana kuita kosi yekurovedza muviri nevamwe vanhu.
Une mamwe mazano anobatsira? Pasi apa